Thomaz Tuchel Oo Ka Hadlay Xaalada Bin Chilwel Iyo Marcos Alonso.
Home Horyaalka Ingiriiska Thomaz Tuchel oo ka hadlay xaalada bin chilwel iyo Marcos Alonso.
Xiddiga heerka caalami ee England ayaa si isa soo taraysa ugu fadhiya kursiga keydka ka dib markii uu jeclaa tababarihiisii hore
Thomas Tuchel ayaa dammaanad ka qaaday Ben Chilwell, kaasoo booskiisii ugu fiicnaa ka helay kooxda Chelsea wax yar ka dib markii Tuchel uu shaqada la wareegay dabayaaqadii Janaayo.
50 milyan ginni ($ 69m) oo uu kaga yimid Leicester City wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Frank Lampard, laakiin wuxuu ku fiicnaa seddex ka mid ah shantii kulan ee ugu horeysay ee Tuchel Waxaa laga saaray labadii kulan ee ugu dambeeyey.
Tuchel wuxuu si isa soo taraysa u arkay Marcos Alonso inuu yahay ikhtiyaarka ka fiican Chilwell ka dib markii uu u wareegay sedex nin oo difaaca garabka ka ciyaara.
Muxuu Tuchel ka yiri Chilwell?
“Haa, hadii uu walwalsan yahay waan fahmi karaa,” ayuu Tuchel u sheegay suxufiyiinta ka hor kulanka Isniinta ay la ciyaarayaan Newcastle ee ka dhacaya Stamford Bridge Waxa uu qaatay go’aano adag oo ka dhan ah isaga halkaas oo ay ahaayeen xulasho adag.
Waxaan u xushay Marcos Alonso halkaasoo aan kula ciyaarnay shan maxaa yeelay wuxuu aad u yaqaanay booska Waxa uu halkaas ku ciyaaray intii uu socday Antonio Conte waxaanan door bidnay Marcos oo ka dhan ah Burnley awoodiisa xagga hawada ee madaxyada si ay u difaacaan oo u weeraraan qaybo go’an.
“Marcos waxa ay aheyd ciyaar aad u fiican halkaas oo uu dhaliyay gool muhiim ah halkaasna ay ku adkeyd inuu ku soo laabto Tottenham Wax isbedel ah kuma sameynin booskan Waan la hadlay ka hor ciyaarta Tottenham waxaanan idhi waa inaad igu aamintaa hada waxaan arkaa kartidaada iyo awoodaad.
Waxaan sidoo kale la arkaa Chilly oo ah nin aad u fiican, nin milicsanaya iyo nin caqli badan Waxaa laga yaabaa inaan dareemay maalmihii ugu horreeyay inay suurta gal tahay inuu wax badan ka fikiro xaaladdan laakiin waxaan rajeynayaa inuusan aad u badneyn maxaa yeelay wuxuu isku aamini karaa naftiisa iyo annaga oo ah shaqaale inuu sii wadi karo riixista waxaanan heli doonnaa suurtagal inaan ku abaalmarin karno.
Waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan kulankii Sheffield United waana muhiim isaga iyo kooxda Mararka qaar waxay qaadataa waqti yar waxaana jira go’aan adag xilligan, koox sida Chelsea ah, oo ay ku jiraan 22 ciyaartoy.
Waxaan rajeyneynaa ma lihin dhaawacyo badan laakiin waa inaan wax ka qabanaa xaaladahaan Waa shaqadayda inaanan lumin ciyaartoydan oo aan ka caawiyo iyaga inaysan lumin kalsoonida Haddii uu sii wado isagoo ah nin cajiib ah, wuxuu leeyahay awood badan waxaanan ka heli doonnaa fursado isaga garoonka dhexdiisa.
Isla mar ahaantaana, waxaan rabnay inaan si caddaalad ah u bilowno qof walba oo aan xukumin xaddiga lacagta ay kooxdu qaadatay laakiin aan qof walba siinno dareen bilow ah Haa Marcos xilligan waa nin ka faa’iidaystay xaaladdan laakiin ma ahan dhamaadka horumarka Chilly. Taasi waa hubaal.
Previous articleWeeraryahankii hore Chelsea & Milan Pato oo heshiis la galay kooxda Orlando City.
Next articleQilaafkii Jose Mourinho iyo Pep guardila oo wili sii socda kadib guushii City.